Mactracker dia manana kinova vaovao miaraka amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny Apple OS | Avy amin'ny mac aho
Ao amin'ity kinova vaovao 7.10.4 ity dia tratra ary misy fiovana vitsivitsy amin'ireo rafitra fiasa natombok'i Apple vao haingana, nanampy izy ireo ny fanarenana ny filaminana sy ny fitoniana miampy ny fanampiana ny sasany amin'ireo vokatra taloha ao amin'ny lisitry ny Apple.
Tsy misy fisalasalana raha te hahita karazana fampahalalana momba ny solosaina Apple na ny rafitra fiasa ianao, Mactracker dia tsy isalasalana fa ny fampiharana anao. Izaho manokana dia efa nahita ny vaovao nandritra ny taona maro ary fantatro ny antsipirian'ny fitaovana Apple ao anatiny, izany dia a fampiharana rakipahalalana feno soso-kevitra.
Ny lisitra miaraka amin'ireo fanovana nampiana an'ity kinova vaovao ity dia tsy dia ela loatra, na dia tianay aza ny hahafantatra ireo fiasa vaovao izay ampiharina amin'ity fampiharana ity. Mactracker tokoa ho an'ny maro amintsika dia tena ilaina amin'ny Mac, iPhone na iPad rehetra.
Nahazo fanavaozana vao haingana ity fampiharana ity manitsy lesoka ary manampy ny rindrambaiko vaovao navoakan'i Apple, anjaran'ity rindrambaiko ity ary nanampy fitaovana amin'ny lisitra lany andro / antitra an'i Apple izy ireo.
Maimaimpoana ho an'ny rehetra ny fampiharana mpampiasa macOS sy iOS, mety ho tena ilaina amin'ny fotoana manokana na ny fahalalana ny antsipirian'ny ekipa tovolahy avy any Cupertino. Ity fampiharana ity dia anisan'ny ankafizin'ny mpampiasa Apple hatry ny ela ary ny hany zavatra ratsy azontsika lazaina momba azy dia amin'ny teny anglisy tanteraka, ny ambiny dia azo antoka fa fampiharana iray napetraka amin'ny solosaintsika rehetra miaraka amin'ny fampahalalana feno momba ny vokatra sy rindrambaiko sonia Cupertino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Mactracker dia manana kinova vaovao miaraka amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny Apple OS
Ny MacBook cool dia afaka mihatsara miaraka amin'ity patanty ity
Firefox 87 dia manolotra ny mekanisma fanakanana Tracker vaovao